राज्यको अरबौं ढुकुटी हिनामिनामा आँखा चिम्म, साना माछा मात्रै कारबाहीमा? – HostKhabar ::
राज्यको अरबौं ढुकुटी हिनामिनामा आँखा चिम्म, साना माछा मात्रै कारबाहीमा?
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रुपमा नवीनकुमार घिमिरे ०७५ असोज ४ गते नियुक्त भएका थिए । उनै घिमिरेले ६५ वर्षीय उमेर हदका कारण अख्तियारमा २३ महिने कार्यकाल सकेर अवकास पाएका छन् । आइतबार मध्यान्ह आयोगको मुख्यालय टंगालमा घिमिरेको बिदाइ कार्यक्रम राखिएको छ ।
घिमिरेको कार्यकालमा प्रतिवद्धताअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । प्रमुख आयुक्तको रुपमा पदभार ग्रहण गर्दा घिमिरेले भनेका थिए, ‘दुई रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने पनि भ्रष्टाचारी हो, करोडौं खाने पनि भ्रष्टाचार हो, सानो–ठुलो कसैलाई पनि छाड्दिनँ ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमान्दार प्रयास गर्ने उद्घोष गरेर आफ्नो इनिङ सुरु गरेका घिमिरेले राज्यसत्ताले संकेत गरेका केही ठुला भ्रष्टाचार बाहेक अन्यमा हात हाल्न चाहेनन् । घिमिरेको कार्यकालमा ‘दुई रुपैयाँ खाने’ वर्गका साना माछा मात्रै निसानामा परे ।
अख्तियारले पछिल्लो २३ महिनामा ठुला भ्रष्टाचारका फाइल धमाधम तामेलीमा राखेको छ । स–प्रमाण संचार मध्यममा घुस लिएको कुरा प्रकाशन भएपछि मात्र तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा राज्यसत्ताको इसारामा मात्र अख्तियारले मुद्दा चलाएको आरोप लागेको छ । अख्तियार प्रमुख घिमिरेले त्यस्ता अरु ठुला भ्रष्टाचारमा राज्यले इसारा नगर्दा धेरै फाईल तामेलीमा राखेका थिए ।
काण्डै काण्डको फेरोलाई छोडेर साना माछामा आँखा (१० ठुला काण्डहरु)
ढुकुटीको ३३ अर्ब दोहन गर्ने रेलको ठेक्कामा अख्तियारको सहमति
संसदीय समिति, अख्तियार र महालेखाको निर्देशन तथा अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनविपरीत मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थासमेत उल्लंघन गर्दै सरकारले पूर्वतयारीविनै मध्य असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्ने कामका लागि ३३ अर्बको टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढायो । ठेक्का सम्झौता गरेर ठेकेदारहरूलाई झन्डै तीन अर्ब पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने, तर ‘साइट क्लियर’ नभएको बहानामा आयोजना अलपत्र पार्ने योजना साथ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । आयोजनाका ५४ प्याकेज विनाप्रतिस्पर्धा १८ ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गरी भागबन्डासमेत भइसकेको थियो ।
यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । दुर्भाग्य १ सरकारकै संरक्षणमा हुन लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचारको यो प्रकरणमा अख्तियारले पनि सहमति जनायो । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले उजुरीमा सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराए । पछि रेल विभागले पनि टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो ।
औषधि खरिदका नाममा महामारीमा भएको अनियमिततामा पाँच महिनादेखि मौन
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ चैतमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल ९ओबिसिआई०लाई एक अर्ब २४ करोड ६८ लाखको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा दियो, त्यो पनि बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा । त्यसका विरुद्ध १९ चैतमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्नविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । चौतर्फी विरोध भएपछि त्यही दिन मन्त्रालयले ओम्नीसँगको सम्झौता पनि रद्द गर्‍यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदकै विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलविरुद्ध पनि अख्तियारमा अर्को उजुरी छ । दुवै उजुरीमाथिको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको भेउ पाएपछि अख्तियारले थप छानबिनका लागि विस्तृत अनुसन्धानमा लैजाने निर्णय पनि गर्‍यो । तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि अख्तियार मौन छ । महामारीका वेला जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै भएको अनियमिततामा अनुसन्धान भइरहेको छ कि छैन कसैलाई थाहा छैन ।
नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिज लगाइँदा मौन
मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिरमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा लिजको म्याद सकिनु ६ वर्षअघि नै यति होल्डिङ्स प्रालिलाई अर्को २५ वर्षका लागि दिने निर्णय गर्‍यो, त्यो पनि कौडीको भाउमा । योसहित नेपाल ट्रस्टमातहत रहेको सयौँ रोपनी जग्गा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक सस्तो रेटमा भाडामा दिइयो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सरोकारमा मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्ता निर्णय भएका थिए, किनभने ट्रस्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहने व्यवस्था छ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा बाँडिँदासमेत सुशासन कायम गर्न खडा गरिएको अख्तियार भने मौन बस्यो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियार पन्छियो ।
सात महिनामा पनि भएन ७० करोड ‘घुस बार्गेनिङ’को अनुसन्धान
गत ७ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड घुसको बार्गेनिङ गरेको ‘अडियो क्लिप’ बाहिरिएपछि भोलिपल्टै उनले राजीनामा दिए । ११ फागुनमा बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी प¥यो । संसद््को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दियो । तर, सात महिना हुन लाग्दा पनि आयोगले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन । अडियो रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्रलाई ‘केही बुझ्नुपर्ने भएकाले’ एक साताभित्र उपस्थित हुन आयोगले अघिल्लो बुधबार बल्ल सूचना जारी गरेको छ ।
संसदीय समितिले चार अर्ब भ्रष्टाचार भनेको वाइडबडी खरिद प्रकरण अख्तियारले दुई वर्षमा पनि टुंगो लगाएन
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको थियो । १७ पुस ०७५ मा समितिले छानबिन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न तीन पूर्वमन्त्री, तीन सचिव, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धकलगायतमाथि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । दोषीको नामै किटान गरेर दिएको वाइडबडी खरिद प्रकरणको पनि अख्तियारले दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत टुंगो लगाएको छैन ।
गरिबका लागि दाताले दिएको २९ अर्बमा भएको अनियमिततामा छानबिन गरेन
विपन्न नागरिकका लागि विश्व बैंकले गरिबी निवारण कोषमार्फत अनुदानमा दिएको २९ अर्बमा पनि ठूलो अनियमितता भयो । कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले रकम दुरुपयोग गरे । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुदानको २९ अर्बमध्ये १० अर्ब प्रशासनिक काममा खर्च भएको र लगानी भएको भनिएको १९ अर्बको पनि जवाफदेही कोही नभेटिएको भन्दै थप छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । कोषको कार्यालयबाट सातवटा गाडीसहित एक हजार १५ जिन्सी सामग्री नै गायब भएको सतर्कता केन्द्रले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । थप छानबिनका लागि केन्द्रले सबै फाइल अख्तियारमा पठाएको थियो । तर, अख्तियारले त्यसमा थप छानबिन गर्न रुचि नै देखाएको छैन ।
किसानको नामका दाताबाट आएको अर्बौँको अनुदान भ्रष्टाचार हुँदा पनि मौन
कृषि अनुदानका नाममा भएको अर्बौँ दुरुपयोगका विषयमा पनि अख्तियार मौन बसेको छ । दाताको अनुदानबाट सञ्चालित दर्जनौँ कार्यक्रममा अर्बौँ रकम अनियमितता भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले बर्सेनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट०, कृषि उद्यम केन्द्र, शीतभण्डार निर्माणलगायत नाममा अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग भएको छ । दाताबाट प्राप्त अनुदानको ठूलो रकम पदाधिकारी, कर्मचारी र बिचौलियाले मात्र पाउने गरेका छन् । तैपनि, अख्तियारले यतातिर हेरेकै छैन ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरण : सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन
आयोगले गत वर्ष ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा दायर गर्‍यो । तर, त्यसमा पनि आयोग सत्ताबाट प्रभावित बन्यो । जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध मुद्दा चलाइएन । जब कि अन्य ६५ जनालाई भने त्यो सुविधा दिइएन । ६५ जनालाई जग्गा जफतकै लागि मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर गरिएका कसैलाई पनि पक्राउ गरिएन, बरु फरार बनाएर अभियोग लगाइएको थियो । जसकारण अहिलेसम्म एकजनाबाहेक कोही पक्राउ परेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, जग्गा बकस पाउने कर्मचारीमाथि पनि छानबिन भएन । उनीहरूका आफन्तविरुद्ध जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । जब कि घुसबापत जग्गा बकस दिइएको छानबिनमा खुलेको थियो ।
अवकाश पाउने वेला आयल निगमको जग्गा घोटालाको फाइल तामेलीमा
नेपाल आयल निगमले ०७३ मा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण विस्तारका लागि झापा, सर्लाही, रुपन्देही र चितवनमा जग्गा खरिद गर्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समिति र महालेखापरीक्षक कार्यालयसम्मले निकाले । बिचौलिया र निगमका कर्मचारी मिलेर जग्गा खरिद गर्दा कैयौँ गुणा बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको ठहरसहित संसदीय समितिले थप छानबिन गरी कारबाहीका लागि ०७४ भदौमा अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, महालेखापरीक्षक कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि निगमले जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म बढी मूल्य तिरिएको, जग्गा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन गरिएको, न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेको स्थानमा भण्डारण स्थल बनाउन लागेकोलगायत गल्ती औँल्याएको थियो । उक्त जग्गा कारोबारमा ६१ करोड ३४ लाख राजस्व मात्रै गुमेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले जग्गा खरिद प्रकरणका मुख्य योजनाकार निगमका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध २२ पुस ०७५ मा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गर्‍यो । तर, जग्गा खरिद प्रकरणमा भने मौनता साँध्यो । हालै मात्र अख्तियारले जग्गा घोटालाको छानबिन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नो बिदाइको अन्तिम घडीमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले यो प्रकरणमा संलग्न अरूलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेका छन् ।
चिनीको कोटा निर्धारणमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनमा पनि अरुचि
स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ३१ भदौ ०७५ मा एक वर्षका लागि एक लाख ७५ हजार टन चिनी आयात गर्न पाउने गरी कोटा निर्धारण गरेको थियो । सरकारको निर्णयका कारण चिनीको मूल्य बढेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्‍यो । कोटा निर्धारण गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले २५ असोज ०७५ मा थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा भएको त्यस प्रकरणमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न जाँगर देखाएन । त्यही भएर दुई वर्ष हुँदासमेत छानबिन टुंगिएको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विशेष समाचार छापिएको छ ।